Shenzhen Kactus Sports Equipment Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2012, tao Shenzhen, Guangdong, Sina.
Miaraka amin'ny fanampiana ny tontolo kilasy R & D ekipa, izahay manana maro Kactus Tech fandringanana sy ny format manan-tompo sisin'ny Patents teti-dratsiny, miaraka amin'ny toetra tsara, fampisehoana, fampiononana sy ny fiarovana ny vokatra, dia mitsangana avy eo amin'ny fifaninanana eran-tsena. Ny mpanjifa tonga avy any rehetra manerana izao tontolo izao, ary manompo toy ny OEM orinasa ho an'ny sasany ny tena malaza bisikileta sy ny mikorisa amin'ny birao mpanamboatra.
Fanatanjahantena Kactus manana 17 CNC machining hubs, 8 Hafanàm-po an CNC lathes, 2 kilalaon'afo milina, 8 mihaohao milina, 6 tsindrona koronosy milina, fitaovana maro hafa mpanampy fisafoana fitaovana.
Izahay rafitra fitantanana ankehitriny, matihanina teknisiana, nandroso famokarana fitaovana, ao amin'ny-nandeha hifanaraka amin'ny zava-baovao sy ny tsy mitsaha-miova tsena, ankehitriny dia ny fanoloran-tenantsika mba hahatonga anao, mahafa-po ny mpanjifa.
Manantena hiditra raharaham-barotra miaraka aminao!